KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Qarax ka dhacay Boosaaso iyo Khasaaro badan oo ka dhashay
Wednesday 5 December 2012 11:41
Qarax ka dhacay Boosaaso iyo Khasaaro badan oo ka dhashay
Boosaaso (KON) - Magaalada Boosaaso ayaa Saakay ka dhacay Qarax xoogan oo lala eegtay Ciidamo ka tirsan Maamulka Puntland, waxaana Qaraxaas ka dhashay Khasaaro badan.
Wararka ayaa sheegaya in Qaraxaan oo ahaa Miinada Nuuca Dhulka lagu Aas-Aaso ey ku dhinteen ugu yaraan 13 Askar oo ka tirsan maamulkaas.
Sidoo kale Warar aan wali la xaqiijin ayaa sheegaya in Dhaawaca ey ku jiraan Saraakiil.
Ciidamadaan ayaa socdeen wadada isku xirta magaalada Boosaaso iyo Galgala ee gobalka Bari.
Wixii Faahfaahin ah fillo dhawaan